Iibso Laptop Laptop La Beddeli Karo Oo La Heli Karo Iyadoo Taleefanka Haya - Rar Bilaash Ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Miisaanka taageerada: Ilaa 22 lbs (10kg) miisaan
La jaan qaadi kara: Dhammaan buugaagta xusuus-qorka, kumbuyuutarka PC-ga, laptop-yada illaa 17 ".
Hawl: Wixii loogu talagalay Macbook 12 ", MacBook Pro 13", MacBook Pro 15. 6 ", Miiska Miiska Joogtada ah ee loogu talagalay Macbook pro 1
Astaamaha: Heerarka 9 ee la hagaajin karo Muuqaal, Xirfadle Telefoon lagu dhex-dhisay, Laabi karo & La qaadan karo, Kala-baxa Heat aad u fiican
Style: Laptop istaag 9 Xaglo Khatar Lagu hagaajin karo Iyadoo Taleefanka Laheli Karo La Noqon karo Laqeexan Karaaya
Hawsha 8: 3
Heerarka 9 ee Aragtida Xagaarsan: Laptop-ka la laaban karo ayaa istaaga wadarta xulashada heerka 9 si aad ugu hagaajiso dhererka daawashada oo qumman. Xaglo kala duwan oo kor u taag ama ka hooseeya iyada oo ku xidhan baahiyahaaga, waxay kaa caawinayaan inaad qorto oo aad u daawato si raaxo leh inta lagu jiro shaqada, caawiye fiican u ah shaqadaada.
Khatarta Ergonomic: Isticmaalayaasha laptop-ka waxaa badanaa laga helaa iyagoo ku jajaban kombuyuutarradooda, iyagoo horay u jajabaya si ay u arkaan ama ugu tiirsanaadaan nooc, taas oo, waqti ka dib, sababi karta xiisad iyo culeys aan caafimaad qabin jirka. MacBookga wuxuu sare u qaadayaa shaashadaada laptop-ka si aad uhesho heer indho oo qumman, waxaad heleysaa aragti sare iyo muuqaal sax ah, wuxuu yareeyaa qoorta oo adkaata, dhabar xanuunka, garabka oo xanuuna, iyo culeyska isha
Ku hay Qaboojiyaha Laptobku: Fadhiiyaha laptop-ka haysta wuxuu leeyahay dalool dusha sare ah si dhakhso ah u faafidda kuleylka. 2 qaboojiyaha qaboojiyaha ayaa kor u qaadaya laptop-ka wax yar, kordhinaya qulqulka hawada oo aad u ilaalineysid laptop-kaaga xaalad wanaagsan, ku samee xawaare aad u sarreeya.
Istaag badan oo shaqeynaya: Buugga xusuus-qorku wuxuu leeyahay laba loox oo isku laaban ah, laba cagood waxay u ahaan karaan sidii qaybta sare ee muujinta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa keydka keydka, jiirka iyo buugaagta, waa xulasho weyn in miiskaaga laga dhigo mid hagaagsan oo abaabulan On istaaggan dhabarkiisa oo loogu talagalay laba taleefan oo haysta si loo dhigo taleefanka gacanta.
Xasiloon oo waara: Dhismo adag oo leh tayo sare leh ABS & qalab bir sare leh, taageer qalabka ilaa 22 lbs (10kg) culeys. Istaag istaaga dusha sare si aad laptop-kaaga u dhigto mid deggan oo ka ilaaliya laptop-gaaga inuu siibto; Suufyada caagga ah ee ka-hortagga warqadda ah ayaa ka fogaata xoqid kasta.
Shey Faa'iido Wanaagsan, waad ku mahadsan tahay kooxda woopshop
Weyn, dhoofsi dhakhso leh oo si fiican u shaqeeya, sare